Featured Blog Posts – March 2014 Archive (11)
कतै हिँउ जमेर चिप्लो बाटो भएको, कतै राताराता पात बाटोभरी छरिएको, बाटो छेउमा निलो खोला बगेको देख्दा त लाग्थ्यो, यो ठाउँ भारतीय निर्देशक यसराजको कुनै फिलिमको रोमान्टिक सिन भन्दा कम छैन । अँझ स्वच्छ हावा नाकमा ठोकिँदा भित्रभित्रै मन कुतकुताएर हाँस्थ्यो र त्यसै त्यसै नाँचु नाँचु लाग्थ्यो…
Added by Sabin Singh on March 28, 2014 at 5:00pm — No Comments
'श्रम गरौं स्वर्ग यहिँ छ'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नाकोत्तर सिद्धाएका एकजना मित्र रोजगारिका लागि धेरै कार्यलय धाएछन् । कतै दुईछाक खानै नपुग्ने तनखा । कतै चारवर्ष कार्यअनुभवको प्रमाणपत्र माग । जेनतेन एकवर्ष रोजगारीका शिलशिलामा उनको राजधानीका सडक गल्लीहरूमा समय वित्यो रे ! त्यसपछि गाउँमा फिरेछन् । सानोतिनो केही गरौं न त, असुरक्षाले कहीं कतै लगानी गर्ने अवस्था भएन रे । अन्त कतै रोजगारी मिलेन रहेछ । अन्ततः उनी खाडी हानिएछन् । गाउँमा आइ.ए./वि.ए.पढेका र राजनितिक पहुँच भएका केही सहपाटीहरू गैह्र सरकारी संस्थाको कार्यक्रममा…
Added by bharat mani regmi on March 28, 2014 at 3:30pm — No Comments
नेपाली सञ्चारमाध्यम र भाषा
उत्पत्ति र विकासलाई हेर्दा संकेतबाट सुरू भएको सञ्चार भाषामा आएर विकसित रुप धारण गरेको पाइन्छ । सामान्य अवस्थामा सञ्चारलाई सूचनाको आदानप्रदानका रुपमा लिने गरिन्छ । यही सूचनाको आदानप्रदानको प्रकृया नै सञ्चार प्रकृया हो । यसरी सञ्चार प्रकृयाको पूर्णताको निम्ति, चाहिने सन्देशको सम्पे्रषणका निम्ति आज भाषा एक अभिन्न अङ्गका रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।
नेपालमा सञ्चारमाध्यमको विकास…
Added by अल्टर कान्छो’ on March 26, 2014 at 4:30pm — No Comments
महिलाका लागि निःशुल्क सूचना प्रविधि तथा अनलाइन मिडिया तालिमको आयोजना हुँदै
इक्वल एक्सेस नेपालले मुलुकभरबाट एकसय जना सामाजिक समस्या झेल्नु या खेप्नुपरेका महिलाहरुका निम्ति निःशुल्क रुपमा सूचनाप्रविधि तथा अनलाइन मिडिया सम्बन्धि तालिम गर्ने भएको छ ।
नेपालभरीबाट १०० जना सामाजिक रुपमा पछाडी पर्नुपरेका महिलाहरुलाई यो तालिममा सहभागि गराउन लागिएको हो । ३० वर्षमुनिको उमेर समुहका महिलाहरुलाई पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चल गरी पाँच विकास क्षेत्रबाट २०–२० जनाका दरले तालिम दिईने इक्वल एक्सेसको तयारी छ । सामाजिक समस्या खेप्नु र…
Added by Chaulagain Tara on March 21, 2014 at 3:00pm — No Comments
नेपाल हङकङ क्रिकेट-१९९८ देखि २०१४ सम्म मेरो सम्झनामा
सन् २०१४ टी-२० बिश्वकप क्रिकेटको पहिलो दिन, दोश्रो खेल नेपाल र हङकङको बिच । नेपालीहरुमा अशिम उत्साह, त्यसमाथि होलीको दिन परेकोले रौनक नै अर्कै । दिनभर अबीरको रंगमा रंगिने र साँझ खेलमा, धेरैको प्लान यस्तै थियो । आफ्ना केहि समस्याले गर्दा होली खेलिन, बरु थाँती रहेका घरायसी कामहरु सकाइयो । आफ्नो घरमा बत्ती नआउने दिन, पिरलो थियो खेल हेर्न नपाइने हो कि भन्ने । साथै आस थियो छुट्टिको दिन, कल कारखाना सबै बन्द छन, बिद्युत प्राधिकरणले दिई पो हाल्छ कि ! साँझको ७ बज्यो, बत्ती आएन, छट्पटी बढ्न लागेको के…
Added by Bigyan Lohani on March 17, 2014 at 4:00pm — No Comments
कालिकास्थानको बाटोमा गफको सुरमा हिँडिरहेको बेला अचानक जोडसित शरिरमा केहि बज्रेजस्तो हुन्छ । राम्रोसंग के हो भन्ने थाहा नपाउँदै त्यो छताछुल्ल मेरो शरिरभरी छरिन्छ । नभन्दै आज पनि लोला खाइयो । धन्न कुनै जरुरी कामको लागी निस्किएकी थिईन नत्र बित्यास हुन्थ्यो । मनलाई सान्तवना दिन्छु म । थुप्रैलाई यो अनुभव भएको हुनुपर्छ विशेष होलीको आगमनका दिनहरुमा । होली शुरु हुन केहि दिन अगाडिबाटै बाटामा हिँड्दा सजग हुनुपर्दछ काठ्माण्डौमा, अरु केहि नभए पनि पानी मात्र भएपनि भरिएको लोला खान पाइन्छ मज्जाले…
Added by Rejina Rai on March 14, 2014 at 12:30pm — No Comments
यात्राविराम (भू-मध्यसागरसम्मको यात्रा-६)
विहान घण्टी बज्दा कोठाका अरु सबै सुतेका थिए । त्यसैले उनीहरुको निन्द्रा भङ्ग नहोस भनेर मैले हतपत फोनको घण्टी बन्द गरेँ । अघिल्लो साँझ अबेर कोठामा फर्केकाले निद्रा अलि नपुगे जस्तो थियो । एक मनले त भुस भएर अबेरसम्म सुत्न भन्थ्यो अनि अर्को मनले ‘यो मौका फेरी आउला नआउला त्यसैले अवसरको भरपुर सदुपयोग गर’ भनेर अहराउँथ्यो । मन नलागी नलागी ओछ्यान छोडेँ । झ्यालबाट बाहिर हेर्दा अँध्यारो थियो । हामीले एक बजेसम्म विमानस्थल पुग्ने भनेका थियौँ । अनि कोठा चाहीँ विहान १० बजे छोड्नु थियो । त्यसैले मलाई…
Added by Raman Paneru on March 13, 2014 at 10:30am — No Comments
सडक विस्तार, भत्काईएको घर र जोखिम
साँझ परिसकेको थियो, बाहिर अँध्यारो भएर पसलहरुले बत्ती बालीसकेका थिए । म पनि काम सकेर अब घर जान निस्किएँ कार्यालयबाट । पार्किंङको समस्या उही त हो हाम्रो राजधानीमा, कार्यालयबाट अलि पर एउटा मित्रको निवासमा गाडी राख्ने व्यवस्था मिलाएको छु । पैदल त्यतै जादैँ थिए, अचानक पछाडीबाट ठुलो आवाज़ र बत्ती पल्याकपुलुक गर्दै दमकल आउँदै गरेको देखेँ । मन चिसो भयो, फेरि कसको घर जल्यो, कसका सपनाहरु खरानी भए, कसको उठिबास लाग्यो भनेर । जति त्यो दमकल नजिक आउँदै थियो, आवाज़ त्यति नै ठुलो गर्दैथियो र मेरो मन…
Added by Bigyan Lohani on March 12, 2014 at 5:00pm — No Comments
'विज्ञान र अध्यात्मको संयोजनको कुनै विकल्प छैन'-मन्त्री यादव
समाजमा बढ्दै गरेको आधुनिक शिक्षा र पूर्विय सभ्यतामा बाँच्ने हामीहरुमा पश्चिमी संस्कारको शिक्षा हावी भइरहेको यस अवस्थामा पूर्विय संस्कार र सभ्यताको प्रचार गर्दै गरेको (आधुनिक गुरुकुलमा) सगरमाथा प्रज्ञा पीठमा आउन पाएकोमा निकै गौरवान्वित भएको कुरा सोमबार एक कार्यक्रमका बिच शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले बताउनु भएको छ । वैज्ञानिक अध्यात्मवाद आजको आवश्यकता, विद्यार्थीलाई सु-संस्कारयुक्त शिक्षा भन्ने मुल नारा र उद्देश्य लिएर अगि बढिरहेको सगरमाथा प्रज्ञा पीठ सिराहाको आयोजनामा सम्पन्न स्वागत तथा…
Added by Kamal Paudyal on March 3, 2014 at 8:00pm — No Comments
सांस्कृतिक विविधताभित्र लुकामारी खेल्दै भक्तपुर
उनी भन्छन् संस्कृति आफै परिवर्तनशील हुन्छ, कहिल्यै स्थिर हुँदैन । समयको प्रवाह सँगसँगै सांस्कृतिक चालचलन, रहनसहन पनि परिवर्तन हुँदै गएनन् भने संस्कृति आफैमा संस्कृति नभएर अन्धविश्वासमा परिणत हुन्छ । अनि अन्त्यमा त्यो मृत सरी हुन्छ । वरिष्ठ संस्कृतिविद् एवं लेखक तेजेश्वर बाबुः ग्वाङ्ग 'सुन्दर र कलात्मक भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रको उत्पति कहिले र कसरी भयो होला' भन्ने सवाल यसरी अर्थ्याउँदै भन्छन्-'चाँगुमा त त्यत्रो ठूलो दरबार राजा मानदेवले बनाएका थिए भने त्यही समयमा यहाँ भक्तपुरमा पनि मानव…
Added by Chaulagain Tara on March 3, 2014 at 5:00pm — No Comments
रोल्पामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कार्यक्रम गर्ने
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले रोल्पाको लिबाङमा ‘दुई दिवसिय विचार गोष्ठी, अन्तक्रिया एवं कला साधक सम्मान कार्यक्रम’ आयोजना गर्ने भएको छ । राप्ती साहित्य परिषद् जिल्ला शाखा रोल्पाको समन्वयमा शनिबार लिबाङमा सम्पन्न बैठकले संयोजन समिति गठन गरिएको छ । यही फागुन ३० र चैत १ गते कार्यक्रम हुने बताइएको छ । कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि राप्ती साहित्य परिषद् जिल्ला शाखा रोल्पाका अध्यक्ष डी.बी. टुहुरोको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय संयोजन समिति गठन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल सङ्गीत तथा…
Added by Khemraj Gaunle on March 2, 2014 at 9:00pm — No Comments